Obama: Waan la dagaalamaynaa ISIS - Wargeyska Faafiye
Obama: Waan la dagaalamaynaa ISIS
Madaxwaynaha Maraykanka ayaa balan qaaday in wadan kiisu uu qaadi doono hawlgal millitari oo xiriir ah si ay u wiiqaan una baabi’iyaan malayshiyada Khilaafada Islaamiga ah.
Isaga oo ka hadlaya khudbad uu Talafeshinka ka jeediyay Obama, waxa uu sheegay in Maraykanku uu hogaamin doono xulafo wayn oo ka soo horjeeda ururkaasi.
Ururkaasi oo maamula qaybo badan oo ka mid ah Ciraaq iyo Suuriya. Madaxwaynuhu waxa uu markii u horaysay amray in diyaaradaha Maraykanku ay duqaymo ka gaysan karaan gudaha Suuriya iyaga oo baacsanaya xoogagga khilaafada Islaamiga ah.
Xoghayaha arimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry, ayaa maanta kulan la yeelan doona qaar ka mid ah Madaxda Suniga ah ee wadamada Carabta, madaxdaas waxaa ka mid noqon doona boqorka Sucuudiga iyo kan Jordan. Kulan kaasina waxa uu ku saabsan yahay sidii uu taageero ugu raadin lahaa qorsha Madaxwayne Obama.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsWar murtiyeedka shirka London.Man Calls 911 Because Wife Wouldn’t Let Him Browse Facebook AloneMali coup leaders defy deadline for quitting powerLix Wadan ooka shiraya Qaxootiga SoomaaliyaDowlad Goboleedka Somali-land oo qabsatay Saax dheer